Tourism neOiri mari yaenda: North Africa paEngland yeCollapse
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Tourism neOiri mari yaenda: North Africa paEngland yeCollapse
African Tourism Bhodhi • Algeria Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Egypt Kudzokorora Nhau • Investments • Libya Kupwanya Nhau • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Tunisia Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Zvinoenderana nenhamba dzevamiriri, Moroko yakanyora hutachiona hwe4,065 COVID-19 uye kufa kwe161 kubva munoverengeka coronavirus; Algeria 3,382 kesi uye mazana mana nemakumi mashanu nevashanu vakafa; Tunisia 425 kesi uye makumi matatu neshanu kufa; uye Libya makumi matanhatu neshanu nyaya uye vaviri vakafa.
Iyo inoverengeka coronavirus yakanonoka kusvika kuNorth Africa asi huwandu hwezviitiko zveCOVID-19 zvave kuwedzera nekukurumidza.
Zvinoenderana nenhamba dzevamiririri, Moroko yakanyora hutachiona hwe4,065 uye kufa kwe161 kubva munoverengeka coronavirus; Algeria 3,382 kesi uye mazana mana nemakumi mashanu nevashanu vakafa; Tunisia 425 kesi uye makumi matatu neshanu kufa; uye Libya makumi matanhatu neshanu nyaya uye vaviri vakafa.
Hamid Goumrassa, muongorori uye mutori wenhau kuAlgiers-based El Khabar bepanhau, akaudza The Media Line kuti kunyangwe paine mutsauko pakupararira uye kushanda kwehutachiona pakati penyika dzekuchamhembe kweAfrica, Algeria neMorocco zvaive zvakafanana nenhamba yakatapukirwa. "Pamusoro pezvo, nyika mbiri idzi ndidzo dzine vanhu vakawanda vakafa kwete chete munyika dzekuchamhembe kweAfrica asi mukondinendi yeAfrica," akadaro.
Goumrassa akatsanangura kuti hutachiona hwakawanda hwakapfuudzwa kuburikidza neAlgeria avo vaisvika vachibva kuEurope, kunyanya Spain neFrance, "avo vakatapurira hama dzavo nenzvimbo dzavaigara, izvo zvakabatsira mukuparadzira hutachiona."
Akataura kuti kusiyana neAlgeria neLibhiya, hupfumi hwayo hwese hunotsamira pamari kubva kumafuta uye gasi rinotengeswa kunze kwenyika, Tunisia neMorocco vaimbovimba zvakanyanya nekushanya. Mativi ese ari maviri akaparadzwa nedenda repasi rose.
“Kubva 2014, Algeria yakatarisana nedambudziko rekushaikwa kwemari nekuda kwekudzikira kwemitengo yemafuta. Ikozvino mitengo yadonha, zvinhu zvave kutonetsa, ”vakadaro.
Goumrassa akati hurumende yeAlgeria iri kuyedza kuvimbisa vagari kuti mamiriro ari kutonga.
Asi, akawedzera, "Nyanzvi mune zvemari vaive vasina tariro kunyangwe dambudziko remakona risati rasvika. Handifunge kuti hurumende inokwanisa kukwidza mutero [mutero] pahupfumi; pane kushomeka. Algeria ichatarisana nedambudziko risati ramboitika. ”
Nyanzvi dzezvekurapa dzenyika dzese dzakange dzakafanotaura kuti vashandi vechiChinese vaizopfuudza COVID-19 kuenda kuAfrica asi ivo ndokuzosimbisa kuti kesi dzakaonekwa dzakasvika neEurope. Nekuda kweizvozvo, nyika zhinji dzemuAfrica dzakamisa nendege ndokuvhara miganhu yadzo.
MuLibya yakaparadzwa nehondo, Ziad Dghem, nhengo yeTobruk-based House of Representatives (iyo inonzi "hurumende yeTobruk" iyo iyo Libyan National Army yakazivisa kuvimbika) uye muvambi weFederal Movement muLibya, akaudza The Media Line kuti mamiriro ezvinhu anga asiri akanaka padanho rezvematongerwo enyika, uyezve kwete pakuchengetedza, kurarama uye hupfumi, "kunyanya nedambudziko remitengo yemafuta inokanganisa zvikuru nyika yakaita seLibya, ine hupfumi chete mafuta."
Nekudaro, Dghem yakaratidza kuti huwandu hushoma pamwe nenzvimbo dzakakura dzemafuta dzinobatsira nyika kugadzirisa dambudziko.
"Kusvika padanho, zviremera zveLibya zviri kudzora mamiriro ezvinhu maererano nekupararira kwehutachiona, sezvo kunyangwe munguva dzakajairika nyika haisi nzvimbo yevafambi kana vashanyi kana nzvimbo yekutengesa," akaenderera mberi. "Nyika idzodzo dzaigara dzichitengeserana nekufamba kwevanhu dzakakanganiswa zvakanyanya maererano nekupararira kwe COVID-19."
Donia Bin Othman, gweta uye muongorori wezvematongerwo enyika, akaudza The Media Line kuti vanhu veTunisia vanga vari pamba pekugara kwavo kweinopfuura mwedzi. Kubva kutanga kwedambudziko, hurumende yanga yakatarisa kune vanhu vaive vakanyanya kutapukirwa nehutachiona, uye vakatora danho nekukurumidza kuti vatsigire madiki epakati nepakati.
"Nezve kugadzirira kwehupfumi, mutungamiri wehurumende akazivisa rubatsiro rwemagariro kumhuri dzinosvika mazana mapfumbamwe ezviuru dzinofungidzirwa pamadhora makumi mashanu emamiriyoni (madhora emadhora zana nemakumi mashanu nemashanu)," Bin Othman akatsanangura. "Pamusoro pezvo, madhora zana mamirioni (mazana maviri nemakumi maviri emadhora) akapihwa masosi nevanhu vasina mabasa nekuda kwemhedzisiro yedambudziko rekona".
Zvakare, vakati nyika yakavimbisa kupa makumi matanhatu ezviuru mapasuru ezvekudya kuburikidza neTunisian Union for Social Security, kuti iendeswe kudzimba pakati paApril 60,000 kusvika pakupera kweRamadan.
“Pane kuyedza kukuru kuri kuitwa, uye chinhu chakakoshesa kudhindwa kwebasa padanho rebazi rezvemagariro. Hapana mubvunzo kuti chimwe chinhu chakanaka chabuda mudambudziko iri: isu takamanikidzwa kushanda nekukurumidza padigitalization, uye tinofanira kuenderera mberi izvi mushure medambudziko uye tizviise pamatanho ese, "Bin Othman akadaro.
Akawedzera kuti hunyanzvi uhu-hwakarerutsa uye hwakareruka maitiro ehurumende, kuunza masevhisi padyo nemugari uye kubatsira kudzikisira huwori uye kushungurudza vanhu vane huwori. "Patinowedzera kudzikamisa huwandu hwevanhu vanopindira padanho rekutonga, ndipo patinowedzera mikana yezvipfumbamuromo," akadaro Bin Othman.
Dambudziko reCOVID-19 rakaratidza kukosha kwehutano hweveruzhinji uye nevevanhu munharaunda, uye kuti zvaive zvakakosha sei kuisa mari muzvikamu izvi uye mukugadzirisa, akadaro.
"Dambudziko iri rinofanira kutungamira mukubuda kwenyika nyowani iri kunetsekana zvakanyanya nezve nharaunda nepasi redu, pamwe nevanhu vanoshanda kukudziridza simba rinowedzerwazve nekutsanangudza patsva nyika, simba, nehunhu munharaunda, nemagariro," Bin Othman akadaro.
North Africa Tourism mari yaive yatodzikira, kunyanya kubva kuNorth America mushure mezvinoitika zvehugandanga.
The African Tourism Bhodhi iri kushanda neNorth Africa Nyika pachirongwa chavo cheProjekti Tariro
by DIMA ABUMARIA , Iyo Midhiya Line